कुनै जोडी किन गर्छन् अत्याधिक शा’री’रिक सम्पर्क ? – rastriyakhabar.com
कुनै जोडी किन गर्छन् अत्याधिक शा’री’रिक सम्पर्क ?
२७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०५:२५
एजेन्सी । सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रेम, विश्वास र समझदारीलाई आधार मानिन्छ । तर, यसलाई अगाडि लैजानको लागि राम्रो यौ’न लाइफ पनि धेरै हदसम्म आवश्यक हुन्छ ।
यौ’न जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर धेरै जोडीहरू यो गर्न हिचकिचाउँछन् भने कोही यसलाई धेरै रमाइलो गर्छन्। भर्खरै गरिएको एउटा नयाँ अनुसन्धानका अनुसार नवविवाहित महिलाले यौ’न को बढी आनन्द लिने र जीवनप्रति निकै उत्साहित रहेको देखाएको छ । अर्कोतर्फ पुरुषमा यौ’न स’म्प’र्क ग’र्ने प्रवृत्तिले व्यक्तित्वमा खासै प्रभाव पार्दैन ।
फ्लोरिडा स्टेट युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिकहरूले २७८ नवविवाहित जोडीहरूमा गरिएको नयाँ अध्ययनमा यौ’न ले मानिसको स्वभाव निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन् । यसका साथसाथै, उनीहरूले सहभागीहरूको पाँच प्रमुख व्यक्तित्व विशेषताहरूमा आधारित व्यक्तित्व परीक्षण पनि लिए।
अन्वेषकहरूले २० देखि ३० वर्ष उमेरका नवविवाहित जोडीहरूलाई विभिन्न तीन प्रकारका प्रश्नहरू सोधे र उनीहरूलाई उनीहरूको दैनिक दिनचर्याहरू दुई हप्तासम्म उनीहरूको डायरीमा नोट गर्न भने।
उनीहरुलाई हरेक दिन यौ’न स’म्प’र्क राखेको कुरा डायरीमा रेकर्ड गर्न भनियो । यदि उसले गर्यो भने, उसले उसलाई एक देखि सात सम्मको गणनामा कति अंक दिन्छ ? नतिजाले यो दुई हप्ताको अवधिमा जोडीहरूले औसत तीनदेखि चार पटक यौ’न स’म्प’र्क ग’रे’को देखाएको छ।
यसअघिका अध्ययनहरूमा महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी यौ’न चाहना र सुरुवात गरेको पाइएको थियो । यद्यपि, सन्तुष्टि अर्को विषय हो र यो ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन कि कति पटक खुसी भएर जोडीहरू यौ’न स’म्प’र्क गर्छन्। स्मरण होस् यौ’न स’म्प’र्कले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ, यसमा कुनै शंका छैन ।